Ahoana ny famadihana ny loko amin'ny Photoshop ary hahazoana valiny tsara | Famoronana an-tserasera
Photoshop dia iray amin'ireo programa fanovana sary malaza indrindra eto an-tany. Matihanina maro no mampiasa azy io hanatanterahana ny zavatra noforoniny na ny endriny ary mahazatra azy ireo ny mahafantatra ireo fika kely atolotry ity interface ity. Na izany aza, raha olom-baovao ianao, na raha mbola mahalala tsara ilay programa ianao, dia mety foana ny tetika sasany, toy ny fahalalana mivadika loko ao amin'ny Photoshop. Hainao ve ny manao an'izany?
Manaraka izany dia homenay anao ny lakile, tsikelikely, mba hahafahanao mamadika loko mora amin'ny Photoshop. Tsotra be izy io, nefa indraindray lasa sarotra satria tsy hainay izay hilalao. Manomboka izao dia hitahiry fotoana ianao hianarana ny fanaovana azy ao anatin'ny minitra vitsy.
1 Atsimbadika ny loko amin'ny Photoshop, inona no ilana azy?
2 Ahoana ny famadihana ny loko amin'ny Photoshop amin'ny sary
3 Avadiho ny loko misy sosona
4 Ampahany manokana ihany no ampanjifaina
Atsimbadika ny loko amin'ny Photoshop, inona no ilana azy?
Raha mbola tsy nanao an'io ianao dia mety manana fanontaniana ny amin'ny antony anaovanao azy. Inona no fampiasana ny loko mamadika in Photoshop? Tokony ho fantatrao fa ity dia manampy vokany mahaliana amin'ny endrikao, sarinao, sarinao ary azonao atao ny milalao miaraka aminy hanomezana ny tetikasanao tetikady voalohany.
Ny zavatra vita, raha ny fahitana azy dia asio sosona loko mivadika amin'ny sary voalohany ka manova tanteraka ny fahitana an'io sary io, Ary, amin'ny tranga sasany, manatsara kokoa ny farany ambany izany.
Noho izany, ny fianarana manao azy tsara dia mety hidika amin'ny fanomezana ny tetikasanao fifandraisana miavaka, ary ny mpanjifanao zavatra izay tsy dia hita loatra ary mety hisy akony lehibe kokoa.
Raha vantany vao hitanao ny vokany mivantana dia azonao atao ny manova sy manova. Ohatra, azonao atao ny mampiasa sivana, fomba, ny fomba itaratry ny jiro amin'ny ampahany amin'ilay sary. Raha fintinina, aza mijanona amin'ny valiny manome anao "manta" fotsiny, rehefa mandeha ny fotoana dia afaka mahazo vokatra tsara kokoa ianao raha manandrana manambatra amin'ny fomba hafa, amin'ny fomba izay hahalavorary ny tetikasa anananao. Aza matahotra ny manandrana zavatra, manana ny bokotra foana ianao,, mamporisika anao izahay hanoratra foana izay ataonao mba hahafantaranao izay nataonao (tsy hiverenana fotsiny, fa satria, raha mahazo tsara ianao vokany, azonao atao fa tsy tadidinao izay nataonao hahazoana azy).
Ahoana ny famadihana ny loko amin'ny Photoshop amin'ny sary
Andao hanomboka amin'ny zavatra tsotra. Photoshop manokatra sary misy loko. Raha te hahita ny vokan'ny fihodinan'ny loko an'io sary io, ny zavatra tsy maintsy ataonao dia ny manisy ny sary / fanitsiana / famadihana. Raha tianao ny hitsin-dàlana fitendry, dia tsindrio Ctrl ary, ajanony io, kitiho ny bokotra I.
Mivantana, ny loko izay ananan'io sary io dia hiova. Fa raha mena sy mainty ny sarinao dia tsy midika izany fa hiverina izy ireo ary ny mainty dia mena ankehitriny, ary ny mena dia mainty ankehitriny. Tsia.
Mamadika loko ao amin'ny Photoshop izay ataony dia raiso ny loko ary ovao amin'ny chromatic mifanohitra aminy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ao amin'ny faribolana miloko dia hanova hatrany ireo loko amin'ny sary ireo izay ao amin'io faribolana io.
Ity no fomba tsotra sy tsotra indrindra hanodinana ny loko amin'ny Photoshop. Azo ampiasaina amin'ny sary famantarana na zavatra tsy ilana sarontava na sosona izy io, fa, raha misy ao amin'ny tetikasanao, dia lasa somary sarotra kokoa ny fizotry ny fampiasam-bola. Azavainay aminao eto ambany izany.
Avadiho ny loko misy sosona
Raha tsy tianao hanova loko ny sarinao tany am-boalohany, ny fomba tsara indrindra ampiharana izany dia amin'ny alàlan'ny sosona iray. Mba hanaovana izany dia mila manokatra ny sary ianao amin'ny Photoshop. Manaraka, mandehana any amin'ny menio Layers ary manampia vaovao. Izy io dia hiseho eo amin'ny tontonana sosona izay matetika no eo ankavanan'ny programa. Ho hitanao eo fa miseho ambonin'ilay voalohany io (raha ny tena izy, raha esorinao ny hidin-trano amin'ny sary dia azonao atao ny mametraka azy etsy ambany raha tianao).
Ankehitriny rehefa manana ny sosona ianao, dia alao antoka fa nasongadina ny kopian'ny voalohany. Mandehana any amin'ny sary / fanitsiana / mivadika ary hiseho ho mivadika miaraka amin'ireo loko izy.
Hanana fomba roa hahitana ny sary ianao, ny iray miaraka amin'ireo loko am-boalohany, ary ny iray avadika. Inona no azony atao aminao? Ohatra:
Mba hamoronana sary izay antsasaky ny loko tany am-boalohany sy ny antsasa izay nivadika.
Milalao filtre sy style hampifangaroana ireo sary roa ho iray amin'ny fomba iray mba tsy hahazoanao ireo loko tany am-boalohany na ireo mivadika, fa ny azonao kosa dia ny loko sy ny endrika fahatelo izay mety hahasarika kokoa.
Ampahany manokana ihany no ampanjifaina
Alao an-tsaina hoe manana sary ianao ary tianao ho samy hafa ny endriny. Ohatra, nivadika ny iray ary ny iray hafa. Midika izany fa atambatra ireo sosona roa (tany am-boalohany sy nivadika), fa ahoana no anaovana azy?
Mba hanaovana izany, ny zavatra voalohany ny ilainao dia ny misafidy ny sosona lehibe (ilay tany am-boalohany, ohatra). Ankehitriny, tsy maintsy asongadinao ilay ampahany tianao hampiasa vola. Manoro hevitra anao izahay hampiasa ny mahitsizoro, ny tsipìka na ny ozatra. Ireto fitaovana telo ireto dia mety amin'ny fanatrarana ny vokatra tadiavinao.
Raha vantany vao manana izany ianao dia mila mamafa ilay ampahany amin'ilay sary fotsiny ary raha hita ilay sosona hafa dia azo inoana fa ho hitanao eo noho eo ny vokany.
Ahoana anefa raha tsy tianao ilay izy? Midika ve izany fa tsy misy ny fiverenana? Raha ny tena izy dia afaka mankany amin'ny Edit / Undo foana ianao ary hanana ny sary iray manontolo indray, toy ny hoe mbola tsy nokapaininao mihitsy. Amin'izany fomba izany dia afaka manandrana impiry araka izay tadiavinao ianao, ary manana sary mizara zoro mahitsizoro isan-karazany mampiseho ny sary (na ny ampahany aminy) miaraka amin'ny feo miovaova, ary mamorona vokarin'ny fahitana manaitra kokoa.
Amin'ny famolavolana ihany koa miaraka amin'ny Photoshop na programa fanovana sary hafa, ny zava-dehibe indrindra dia ny manandrana. Indraindray, tsy ny zava-misy fotsiny ny fanarahana torolàlana fa, rehefa mianatra ianao dia tsy maintsy mandroso ny tenanao mba hanandrana izay hitranga raha nanova zavatra ianao, na natambatra tamin'ny fomba hafa hikarakarana ireo sary.
Ary tadidio ny zavatra iray, fa izay rehetra atao amin'ny Photoshop dia azo atao ihany koa amin'ny mpamoaka sary hafa. Tokony ho fantatrao fotsiny hoe iza avy ireo baiko ampiharina hiteraka vokatra mitovy amin'ity programa ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny famadihana ny loko amin'ny Photoshop